Moscow Technical University of Communications iyo Aqbaarta
Moscow Technical University of Communications iyo Aqbaarta Details
gaabinta : MTUCI
Ha iloobin in aad wada hadlaan Technical University of Communications Moscow iyo Aqbaarta
Qor at Technical University of Communications Moscow iyo Aqbaarta
On 11-kii February ee, 2011 Moscow Technical University of Communications iyo Aqbaarta (MTUCI) u dabaal-guuradii 90aad.
Mid daraasiin kun oo ka qalin ay halkaas ceel yihiin- saynisyahano yaqaan iyo khabiiro, Tirokoobyada gobolka iyo dadweyne aad u fiican ee Russia iyo dalal badan oo ka mid ah Asia, Africa, Yurub iyo Latin America.
Maanta MTUCI waa xarunta ugu weyn ee waxbarashada iyo sayniska diyaarinta iyo kuwii horeba ee takhasuska leh xirfad sare oo duurka ku of isgaarsiinta, informatics, injineernimada radio, dhaqaalaha iyo maamulka.
Dhismaha Jaamacadda daboolaa laba laamood gobolka ku yaal magaalooyinka reer Rostov-on-ka Don iyo Nizhniy Novgorod, Sayniska Research Center, Xarunta Tababarka Isgaarsiinta Advanced, College of Telecommunications, Pre- waxbarashada diyaarinta Center, Sayniska- Waxbarashada Range of Tabaha Cusub, Library Farsamada Sayniska. Siddeed Tababarka Xarumaha on diyaarinta takhasus farsamo Ruush abuuray by MTUCI wada leh shirkadaha isgaarsiinta adduunka ugu horeeysa waxaa shaqeynaya. On saldhig MTUCI ku Technopark a run ahaantii ka shaqeeya la aasaasay by daraasiin ka qaybgalayaasha shirkadaha kala duwan iyo ururo in isgaarsiinta iyo teknoolajiyada macluumaadka gudbikaraa waxaa la abuuray.
Jaamacadda ayaa madax Waxbarashada- Ururka habka waxbarashada berrinkii isgaarsiinta, taas oo ka kooban in ka badan 80 hay'adaha waxbarashada sare ee Russia iyo dalalka CIS.
Shaqaalaha cilmiga MTUCI ku saabsan yahay 700 dadka. iyaga ka mid ah waxaa jira in ka badan 100 Professor iyo in ka badan 400 musharax ee cilmiga iyo macalimiinta ka tirsan. Ka mid ah Professor of University waxaa xubno buuxa iyo wariye oo ka mid ah Dugsiyada tacliinta sare Ruush iyo kuwa caalamiga ah, ku guuleysatay of Lenin iyo abaal-marinno State, abaalmarino ee Dowladda Ruushka.
About afar iyo toban kun ardayda wakhti buuxa iyo waxbarashada warqadihiisa, ardayda post-graduate oo ka qaybgale koorsooyin kala duwan yihiin waxbarasho Jaamacadda. Waxbarashada waxaa lagu fuliyaa sida ay nidaam casri ah multilevel waxbarasho: bachelor ah, injineerka, odayga on 25 gaarka ah iyo 8 tilmaamaha. Hababka iyo hab oo tababar ah oo ku saleysan oo ka mid ah guulihii ugu dambeeyay ee berrinkii isgaarsiinta iyo teknoolajiyada macluumaadka waxaa loo isticmaalaa in MTUCI ah. Fikradda ah “Jaamacadda electronic »jidaynayey “si electronize” oo dhan geeddi socodka doorashada, gelitaanka, tababarka iyo imtixaanka ee ardayda waxaa la ogaaday. Sanad ka badan 1000 ardayda iyo ardayda post-graduate ka qayb shaqada sayniska qaataan oo duurka ku of teknoolajiyada infocommunication cusub on salka MTUCI Sayniska Center Research ah .
iskaashiga caalamiga ah ee Jaamacadda ayaa waarta muddo ku dhow 70 sano. Ardayga ugu horeysay shisheeye yimid inaad wax ka barato MTUCI ee 1946. Tan iyo markaas dhawr kun oo sayidyadooda, iskaabulo, injineerada, ardayda iyo ka badan 350 musharax ee cilmiga ka 82 wadamada dunida ayaa la diyaariyey. On ku salaysan heshiisyo toos ah iskaashi la 48 hay'adaha iyo 16 shirkadaha ka 46 dalalka shisheeye waa la fuliyay. University waa xubin ka mid ah Sector ee Horumarinta ee Midowga Caalamiga ah ee Isgaarsiinta (ITU) oo kaalin muhiim ah in hawshu ka mid ah ITU iyo ururada kale ee caalamiga ah ee isgaarsiinta
Department of “Technology Information”
Department of “Radio iyo Television”
Kulliyadda “Networks iyo nidaamka isgaarsiinta”
Kulliyadda Dhaqaalaha iyo Maamulka
1 General Technical Kulliyadda
2 General Technical Kulliyadda
Time iyo waraaqaha guud kulliyadaha farsamada
tababarka Kulliyadda iyo kuwii horeba (macalimiinta iyo xirfadlayaasha)
Taariikhda University waxay bilaabeen in 1921 marka Institute Moscow ee Electrical Engineering iyo Isgaarsiinta Qaranka (MIEENC) la qotomiyey.
In 1938 MIEENC ku biireen Engineering iyo Technology Academy ee Isgaarsiinta (ETAC). Labadan hay'adaha waxbarashada sare sameeyay salaysan Institute Moscow ee Communications Injineerro (jiir) kaas oo lagu bedelay in 1946 galay Institute Moscow ee Isgaarsiinta Injineerro (caarada).
In 1988 saddex machadyada – siisid, Machadka All-Union for Correspondence ee Electrical Engineering iyo Institute All-Union ee Maamulka Shaqaalaha Islasocodka sameeyay salaysan Institute Moscow ee Communications (MIC).
By amar ee Dowladda Ruushka ee 1992 MIC la beddelaa Technical University Moscow ee Isgaarsiinta iyo Aqbaarta (MTUCI).
Ma rabtaa wada hadlaan Technical University of Communications Moscow iyo Aqbaarta ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Moscow Technical University of Communications iyo Aqbaarta on Map
Moscow Technical University of Communications dib u eegista iyo Aqbaarta
Ku biir si ay ugala hadlaan of Technical University of Communications Moscow iyo Aqbaarta.